578s Ukuphila Okuhlanyayo Ngaphakathi kweMiami Mega Jail images and subtitles
Ubhekene necala elibucayi ogcizelela ukuthi awuzange wenze. Awukho msulwa kuze kufakazelwe ukuthi unecala elifanele, kodwa lolo suku lwenkantolo lungathatha isikhashana fika. Okwamanje indawo yakho yokuhlala izoba yilokho okubizwa ngokuthi iMiami Mega Jail. Usemncane, awukaze uhlale ejele ngaphambili futhi awusiye umuntu onzima, ngakho-ke uyiswa phansi lapho uzobekwa khona awukwazi ukukholwa okubonayo. Imigqa yamaseli egcwele inqwaba yamadoda, amemeze, amemeze, eza emigoqweni futhi asongele wena. Kuyisiphithiphithi esikhulu. Ukulinda esitokisini sakho yikomidi elamukelayo lamadoda angama-20 abukeka ethukuthele, ayingozi. Awunamdlalo walaba bafana, kepha kuzofanela ulwe, ungenzi phutha ukuthi. Usanda kungena enkundleni yokulwa nokufa. Kunzima ukukhetha ukuthi yiliphi ijele elibi kunawo wonke e-USA ngoba ngokudabukisayo kukhona amaningi izindawo ezingancintisana ukuze zibe phezulu, noma mhlawumbe kufanele sithi phansi, zohlu. Noma ngubani ohlale endaweni esizokhuluma ngayo namhlanje ngeke akhubeke siyikhethile njengengubi kakhulu, lokho nakanjani. Kufanele sisho lokho uma ukhuluma nezigebengu ezilukhuni ezazingena ziphuma ejele futhi amajele ajwayele ukukutshela ukuthi ijele libi kakhulu. Abantu abaningi bathi ijele liyindlovane kunejele futhi linobudlova kakhulu. Indawo esikhuluma ngayo namuhla ibizwa ngokuthi, "Isihogo EPharadesi", nangemva kwalokho ucwaningo lwethu ngeke siluphikise. Esikhuluma ngakho empeleni kubizwa ngokuthi “I-Miami-Dade Corrections and Regency kabusha Umnyango ”, oqukethe amayunithi ambalwa kufaka neKhempu eBuot engaziwa. Labo abangangeni kulelo kamu bagcina ejele, kanti abanye babo basaqhubeka ebusheni babo. I-Boot Camp ingenye indaba iphelele, kepha sizokusho uma siqhathaniswa nejele yi-a ikamu lamaholide. Uhlelo lonke luhlala abantu ababalelwa ku-7,000, yize kukhona okufana nabantu abangama-114,000 dlula iminyango unyaka nonyaka - lokho cishe kungama-312 ngosuku. Le yindawo ematasa, lokho nakanjani. Noma kunjalo, inqubo yojele yesi-7 ngobukhulu eMelika. Iningi leziboshwa alizukuchitha isikhathi eside lapho nesikhathi esimaphakathi esichithwa kulo lonke uhlelo yizinsuku ezingama-22 kuphela, kepha uzothola nabantu abebelinde ukuqulwa isikhathi eside iminyaka emihlanu. Lokhu kusiletha kolunye lwamayunithi aphambili, indawo eyodwa eshaya kakhulu izihloko ngezimo zalo ezinesihluku. Ibizwa ngokuthi yi-Pre-Trial Detence Center, noma kwesinye isikhathi ibizwa nge-Main Jail. Imvamisa kuhlala abantu ababalelwa ku-1,700 ngasikhathi. Iningi labantu abalapho namanje abamsulwa kwezobuchwepheshe njengoba bengakaze kutholakale nginecala, kepha ukulinda lolo suku lwenkantolo kungathatha iminyaka. Akulula ukuzixazulula uma ukule hlobo lwe-limbo, futhi uma uhamba udlula amaseli kuwo ezinye izitezi uzobona ukuthi izinto azilungiswa kanjani. Kuneziboshwa eziyekile ngisho nokulwa namacala azo ngoba zifuna nje ukuthola ngaphandle kwalapho, abangenacala noma cha, bafuna nje ukuya ejele. Amakamelo aphansi kakhulu yilapho abasolwa ngokuba yizigebengu eziyingozi kakhulu zigcinwa bese kuthi lezo izitezi ezinhlanu nesithupha. Amangqamuzana lapha ngokuvamile ahlala noma kuphi ukusuka emadodeni ayi-15 kuye kwangama-25 futhi kuleli qembu kukhona uhlobo lobukhosi. Njengoba abafana abakhona lapho besho okuningi, kusinda kwabanamandla kakhulu, ngakho-ke uma ungekho wokulwa ungahle ube nesikhathi esinzima. Ufuna isibhakela esithile, kuzofanela uzilwele. Kulungile, awukhathaleli ukuthola indawo embi kakhulu esitokisini, kepha kuthiwani uma umuntu nje kuthatha izinto zakho? Njengoba esinye isiboshwa lapho sithe, "Ngixhaphaza ababuthakathaka." Uma ungazilweli ngezinto zakho uzoba nesihogo sesikhathi, futhi sisho lokho okungalungile. Uma ukhasa, uzoshaywa nomaphi lapho uya khona ngaphandle kokuthi uvikeleke. Njengoba esinye isiboshwa sasho engxoxweni ngosuku lwakho lokuqala esitokisini sakhe kufanele ulwe ngoba nje bafuna ukukuhlola njengendoda. Kodwa kungani? Impendulo yakhe kwaba ukuthi uma ungalwi kuyisibonakaliso sokuthi kukhona okungahambi kahle kuwe. Mhlawumbe uyisidlakela, ngoba ubungafuni ukulwa. Kuzwakala kungenangqondo, kodwa isiboshwa sathi leyo yimithetho, leyo yikhodi. Iqiniso ukuthi, iziboshwa azisoze zichaza ngokucacile imithetho yekhodi. Omunye umgadli wachaza ukuthi uma umuntu engalwi nomuntu ngamunye ebambelela ku ikhodi iseli lonke lingamshaya lowo muntu. Kwesinye isikhathi umuntu wesilisa angashaywa ngenxa yokuphazamiseka okuncane, futhi kwesinye isikhathi kungenzeka kube njalo osolwa ngokuthile angakwenzanga. "Ubani ontshontshe ukudla kwami?" Akekho ophendulayo, kanti obuthakathaka uthatha ukushaywa. Awunamandla, uthatha icala. Kwakufanele akwenze, ngoba wayezolahlekelwa ubuso uma engakwenzanga. Njengoba wonke umuntu esho lapho, kufanele ulwe nje. Banezimiso eziningi ezingabhaliwe abazemukelayo, kanti eyodwa ibizwa nge-GABOS. Lokho kusho ukuthi, "Umdlalo awususelwa ku-Sympathy". Ngokungafani namanye amajele e-federal, cishe ungathathwa ngaphansi kwephiko lomuntu. I-Jail yindlela yokulwa ngokweqile kunejele, yize sizwa kancane ngesihluku yezinhlelo zejele. Vele ungene ezinhlanganweni lapho iziboshwa zangaphambili zikhuluma khona ngolwazi lwazo ezilungisweni uhlelo futhi uzothola abaningi babo bethi ijele lalibi kakhulu. Okuhlekisayo wukuthi iningi labantu alikaze litholakale linecala okwamanje futhi bayelashwa kubi futhi ubhekane nezinsongo ezengeziwe. Isikhathi sokuqala sinokwesaba ngokuphelele futhi ezimweni eziningi kufanele sibe yiso; ngengqondo ungathwali umthwalo lapho; ukudla kuyesabeka; amaseli angcolile futhi azosebenzisa iningi wesikhathi sabo kuleso seli. Uzothola iziboshwa eziningi zithi zizokwenza “inhlamvu” nje ukuphuma lokho isihogo. Inhlamvu kungunyaka ejele. Kungani amajele engaba yikhaya lesimo esibi kakhulu, ungahle uzibuze. Yebo, azenzelwe ngempela ukugcina umuntu isikhathi eside kakhulu. Inkinga iwukuthi, ngisho nesiqu esifushane singadalulwa kanti abanye abantu benza okuningi kakhulu kunokuthi ukuhlala isikhashana uma icala labo libambezelekile. Ijele kufanele linikeze uhlobo oluthile lwenduduzo… Ijele liyisihogo esinezinzuzo, ijele lizwa izinhlungu ezingapheli esihlanzweni nasezingxenyeni ezimbi kakhulu awuyazi indlela yokuphuma. Ngenxa yalokhu, iziboshwa zivame ukuba zinokhahlo, futhi zinolaka, futhi zikhungatheke, futhi ngezinye izikhathi zilungile nje Uhlanya nje ngemuva kokuphuma crank-athon enezinyanga ezili-18. Konke okushiwoyo, cabanga ukuthi kuthunyelwe ebubini kulezi zindawo? Ake sibuyele kuwe sithathwa sisiya e-6th floor eMiami. Kube lapho esitokisini unogada ehamba, futhi labo nogada bavumile ukuthi abakwazi ukuphendula nodlame olushesha ngokwanele ukuluvimba. Bayakuvuma ukushiya iziboshwa kumakhodi abo. Labo nogada basho obala ukuthi akukho abangakwenza mayelana nokushaywa kanzima, ukugwazwa, ukweba. Akwanele nje ukuba abe yonke indawo futhi ubone konke. Lapho lowo nogada ehamba, ushiywe ukuba ulwe nayo esitezi 5 no-6 sika lesi sakhiwo esibi esinsundu. Kodwa kungani? Kungani bengahlangani nje? Isiboshwa esithile saphendula sathi, "Ikhodi yikhodi." Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi uma ubonwa ungamhloniphi umuntu olwa naye, ubopha. Awubonisani nomuntu ngoba le akuyona indawo efanelekile yokuqala. Abantu abangahlali emigwaqweni, bathi, abaqondi ikhodi yemigwaqo. Lolu hlobo lwasendle lasentshonalanga lubyela emuva kulokho ososayensi abaye bakubiza ngokuthi, “isiko wodumo. ” Uhlazisa umuntu wesoka, uyalwa, udonsa izinkemba, uthatha izikhundla eziyishumi udubule. Emazweni angaphandle sivele saphuma kulokhu iningi, kodwa ngaphakathi ejele le khodi, leli siko lokuhlonipha, lisakazekile. Phezu kokwebiwa nokulwa ne-Main Jail eMiami kuye kwabizwa ngokuthi okubi kakhulu eMelika kwezinye izinhlobo zokuhlukunyezwa kwabesilisa nabesilisa. Izinto ezesabekayo zingenzeka lapho onogada kuphela behamba ngaphandle kwamaseli kanye ngehora. Iziboshwa ezibuthakathaka zishiywe njengezinyamazane phakathi kwabazingeli be-apex. Ngokujabulisayo, ijele lenze intuthuko enkulu kule minyaka embalwa edlule, libe linye kakhulu Kufakwe amakhamera. Bese kuba nodaba lwalesi sakhiwo sejele abantu abaningi abathatha izidakamizwa zengqondo. Ukuxabana kweziboshwa kuvame ukuqubuka lapho umuntu ogula ngengqondo enza ngendlela ezinye iziboshwa angithandi. Njengoba iMarshall Project ibike, “uhlelo lwejele laseMiami yisikhungo esikhulu kunazo zonke abantu abagula ngengqondo eFlorida. ” Abantu abagula ngengqondo bavame ukuba inyamazane, bese begcina phansi ngamadoda angama-20 athatha iphenduka ukuze ibabhoboze. Lokhu ukuhoxa kuphathwa kanjani. Nganoma iluphi usuku amadoda angena futhi aphuma ezigulini. Kufana nomnyango ojikajikijiki ogcwele igazi. Eqinisweni, kube nodlame olukhulu kangangokuba uMnyango Wezobulungiswa uthe iMiami-Dade Uhlelo lwejele lwalungaphandle kokuphathwa futhi iziboshwa kanye nonogada babhekana nezingozi eziningi kakhulu. Kukhona obekufanele kwenziwe, kusho umnyango. Eminyakeni embalwa emuva kwejele kwabhekana nokuhlolisiswa okuningi ngemuva kokushona kwabantu abangu-8 ezinyangeni ezinhlanu nje. AbakwaDoJ bathi ukushona kwabathathu abantu abangenangqondo kuyaphazamisa kakhulu. Omunye umfana obezoshayela ngenkathi emisiwe ungene ngomgqibelo kwathi eseshonile ngokulandelayo UMsombuluko. Abanye ababili bashonile kungakapheli isonto, ikhomishini ithi uhlelo, "luphuke kakhulu." Kwavela ukuthi kulaba abayisishiyagalombili abashonile eyodwa ibigxile ekuyaphunyuleni iziboshwa ebelandela emva kwakhe ezomshaya. Kwashiwo nemimese. Isitezi esibi kakhulu, esake savalwa, kwesinye isikhathi sasibizwa ngokuthi “Isisekelo Esilibalekile.” Kwakuyizinga lesishiyagalolunye lapho kwakugcinwa khona iningi labantu abagula ngengqondo. Lapha kwakuyilapho iziboshwa zazivame ukushiyelwa khona bese zinganakwa, futhi ezimeni eziningi zazithatha izimpilo zakho. Emuva kosuku kuleli banga kuleli zinga iziboshwa zazilala phansi ngaphandle kokulala, yize kunjalo indawo yokusebenza kwengqondo kwakumele ibe ngumuntu onenhlonipho. Ezinye iziboshwa zitholwe ziphuza ezindlini zangasese, kuthi lapho lokhu kufikelwa yindaba kule ndawo wabizwa, "owesabekayo". Kube khona ukukhala komphakathi. Kepha njengoba uzwile, kusenezinkinga lapho umuntu onenkinga yezengqondo evalelwa phezulu nama-gladiator asemgwaqweni wanamuhla neziqhwaga ezinekhodi engenazo ngamabomu ngamabomu. Akuwona wonke amafulethi amabi njengezindaba esikhulume ngazo, futhi kwezinye izikhathi ikakhulukazi abantu abayingozi noma abasengozini bazohlalwa bodwa. Noma kunjalo, phelela kwelinye lalawo mafulethi aphakeme ejele elikhulu futhi uzobona ukuthi kunjani ukuboshwa kwelinye lamajele aqinile emhlabeni. Kunezinye izinkinga futhi, ze-ilk engajwayelekile. Ngo-2019, abantu abangu-17 baphuthunyiswa esibhedlela bevela kule ndawo ngenxa yokugula okuthile okungazelelwe. Kwehla izisebenzi eziningana nazo. Kwenzenjani? Akekho owazi ngempela. Iqembu lamabhomu labizwa ngisho ngemuva kokuba kutholakale uketshezi olungaziwa, kepha kwaphenduka ukungabi nabungozi. Isizathu okungenzeka ukuthi abantu baqale ukuzikhathaza kwakuwukubhema intuthu evela kunobuthi isidakamizwa. Uma umoya wokuhogela intuthu usuka kude ungamhlisela umuntu phansi nausea nausea, yini eMhlabeni ababengabhema kuyo lapho? Ngesi? Kuyakhombisa nje ukuthi leyondawo ihlanya kanjani. Sizokushiya ngesibuyekezo esikuthole ekhasini le-Facebook elizinikezwe kuleli jele: "Wamukelekile esihogweni. Umuntu angaba ngcono ngokufa kunokukhuthazelela ukuhlukunyezwa nokuhlushwa ukuboshwa kulo mshubhu ongcolile nowenyanyekayo. ” Awufuni ukuthunyelwa eMiami Jail kodwa ufuna uchofoze kokunye kwalokhu amavidiyo. Ngakho-ke hamba ubuke le vidiyo manje ukuthola enye ividiyo enhle evela ku-The Infographics Show noma lena lapha. Ungakhetha eyodwa kuphela kepha ukhethe futhi uhambe ubuke enye ividiyo manje!
Ukuphila Okuhlanyayo Ngaphakathi kweMiami Mega Jail
< start="1" dur="4.029"> Ubhekene necala elibucayi ogcizelela ukuthi awuzange wenze. >
< start="5.029" dur="4.521"> Awukho msulwa kuze kufakazelwe ukuthi unecala elifanele, kodwa lolo suku lwenkantolo lungathatha isikhashana >
< start="10.55" dur="4.18"> Okwamanje indawo yakho yokuhlala izoba yilokho okubizwa ngokuthi iMiami Mega Jail. >
< start="14.73" dur="3.93"> Usemncane, awukaze uhlale ejele ngaphambili futhi awusiye umuntu onzima, ngakho-ke >
< start="18.66" dur="3.42"> uyiswa phansi lapho uzobekwa khona awukwazi ukukholwa okubonayo. >
< start="22.08" dur="5.45"> Imigqa yamaseli egcwele inqwaba yamadoda, amemeze, amemeze, eza emigoqweni futhi asongele >
< start="28.53" dur="1"> Kuyisiphithiphithi esikhulu. >
< start="29.53" dur="4.32"> Ukulinda esitokisini sakho yikomidi elamukelayo lamadoda angama-20 abukeka ethukuthele, ayingozi. >
< start="33.85" dur="4.26"> Awunamdlalo walaba bafana, kepha kuzofanela ulwe, ungenzi phutha >
< start="38.11" dur="1"> ukuthi. >
< start="39.11" dur="2.04"> Usanda kungena enkundleni yokulwa nokufa. >
< start="41.15" dur="4.83"> Kunzima ukukhetha ukuthi yiliphi ijele elibi kunawo wonke e-USA ngoba ngokudabukisayo kukhona amaningi >
< start="45.98" dur="4.989"> izindawo ezingancintisana ukuze zibe phezulu, noma mhlawumbe kufanele sithi phansi, zohlu. >
< start="50.969" dur="3.721"> Noma ngubani ohlale endaweni esizokhuluma ngayo namhlanje ngeke akhubeke >
< start="54.69" dur="2.869"> siyikhethile njengengubi kakhulu, lokho nakanjani. >
< start="57.559" dur="3.631"> Kufanele sisho lokho uma ukhuluma nezigebengu ezilukhuni ezazingena ziphuma ejele >
< start="61.19" dur="3.35"> futhi amajele ajwayele ukukutshela ukuthi ijele libi kakhulu. >
< start="64.54" dur="3.38"> Abantu abaningi bathi ijele liyindlovane kunejele futhi linobudlova kakhulu. >
< start="67.92" dur="3.61"> Indawo esikhuluma ngayo namuhla ibizwa ngokuthi, "Isihogo EPharadesi", nangemva kwalokho >
< start="71.53" dur="2.62"> ucwaningo lwethu ngeke siluphikise. >
< start="74.15" dur="4.3"> Esikhuluma ngakho empeleni kubizwa ngokuthi “I-Miami-Dade Corrections and Regency kabusha >
< start="78.45" dur="4.63"> Umnyango ”, oqukethe amayunithi ambalwa kufaka neKhempu eBuot engaziwa. >
< start="83.08" dur="3.6"> Labo abangangeni kulelo kamu bagcina ejele, kanti abanye babo basaqhubeka >
< start="86.68" dur="1"> ebusheni babo. >
< start="87.68" dur="4.11"> I-Boot Camp ingenye indaba iphelele, kepha sizokusho uma siqhathaniswa nejele yi-a >
< start="91.79" dur="1.14"> ikamu lamaholide. >
< start="92.93" dur="5.5"> Uhlelo lonke luhlala abantu ababalelwa ku-7,000, yize kukhona okufana nabantu abangama-114,000 >
< start="98.43" dur="4.2"> dlula iminyango unyaka nonyaka - lokho cishe kungama-312 ngosuku. >
< start="102.63" dur="2.11"> Le yindawo ematasa, lokho nakanjani. >
< start="104.74" dur="3.48"> Noma kunjalo, inqubo yojele yesi-7 ngobukhulu eMelika. >
< start="108.22" dur="3.64"> Iningi leziboshwa alizukuchitha isikhathi eside lapho nesikhathi esimaphakathi esichithwa kulo lonke uhlelo >
< start="111.86" dur="4.07"> yizinsuku ezingama-22 kuphela, kepha uzothola nabantu abebelinde ukuqulwa isikhathi eside >
< start="117.67" dur="4.229"> Lokhu kusiletha kolunye lwamayunithi aphambili, indawo eyodwa eshaya kakhulu izihloko >
< start="121.899" dur="1.151"> ngezimo zalo ezinesihluku. >
< start="123.05" dur="4.98"> Ibizwa ngokuthi yi-Pre-Trial Detence Center, noma kwesinye isikhathi ibizwa nge-Main Jail. >
< start="128.03" dur="3.34"> Imvamisa kuhlala abantu ababalelwa ku-1,700 ngasikhathi. >
< start="131.37" dur="3.83"> Iningi labantu abalapho namanje abamsulwa kwezobuchwepheshe njengoba bengakaze kutholakale >
< start="135.2" dur="2.77"> nginecala, kepha ukulinda lolo suku lwenkantolo kungathatha iminyaka. >
< start="137.97" dur="3.96"> Akulula ukuzixazulula uma ukule hlobo lwe-limbo, futhi uma uhamba udlula amaseli kuwo >
< start="141.93" dur="2.89"> ezinye izitezi uzobona ukuthi izinto azilungiswa kanjani. >
< start="144.82" dur="3.559"> Kuneziboshwa eziyekile ngisho nokulwa namacala azo ngoba zifuna nje ukuthola >
< start="148.379" dur="3.781"> ngaphandle kwalapho, abangenacala noma cha, bafuna nje ukuya ejele. >
< start="152.16" dur="3.7"> Amakamelo aphansi kakhulu yilapho abasolwa ngokuba yizigebengu eziyingozi kakhulu zigcinwa bese kuthi lezo >
< start="155.86" dur="1.22"> izitezi ezinhlanu nesithupha. >
< start="157.08" dur="4.44"> Amangqamuzana lapha ngokuvamile ahlala noma kuphi ukusuka emadodeni ayi-15 kuye kwangama-25 futhi kuleli qembu kukhona >
< start="161.52" dur="1.249"> uhlobo lobukhosi. >
< start="162.769" dur="4.382"> Njengoba abafana abakhona lapho besho okuningi, kusinda kwabanamandla kakhulu, ngakho-ke uma ungekho >
< start="167.151" dur="2.599"> wokulwa ungahle ube nesikhathi esinzima. >
< start="169.75" dur="2.6"> Ufuna isibhakela esithile, kuzofanela uzilwele. >
< start="172.35" dur="3.49"> Kulungile, awukhathaleli ukuthola indawo embi kakhulu esitokisini, kepha kuthiwani uma umuntu nje >
< start="175.84" dur="1.02"> kuthatha izinto zakho? >
< start="176.86" dur="2.599"> Njengoba esinye isiboshwa lapho sithe, "Ngixhaphaza ababuthakathaka." >
< start="179.459" dur="3.691"> Uma ungazilweli ngezinto zakho uzoba nesihogo sesikhathi, futhi sisho lokho >
< start="183.15" dur="1.19"> okungalungile. >
< start="184.34" dur="4.72"> Uma ukhasa, uzoshaywa nomaphi lapho uya khona ngaphandle kokuthi uvikeleke. >
< start="189.06" dur="3.899"> Njengoba esinye isiboshwa sasho engxoxweni ngosuku lwakho lokuqala esitokisini sakhe kufanele ulwe >
< start="192.959" dur="2.301"> ngoba nje bafuna ukukuhlola njengendoda. >
< start="195.26" dur="1"> Kodwa kungani? >
< start="196.26" dur="3.38"> Impendulo yakhe kwaba ukuthi uma ungalwi kuyisibonakaliso sokuthi kukhona okungahambi kahle kuwe. >
< start="199.64" dur="2.269"> Mhlawumbe uyisidlakela, ngoba ubungafuni ukulwa. >
< start="201.909" dur="4.151"> Kuzwakala kungenangqondo, kodwa isiboshwa sathi leyo yimithetho, leyo yikhodi. >
< start="206.06" dur="4.04"> Iqiniso ukuthi, iziboshwa azisoze zichaza ngokucacile imithetho yekhodi. >
< start="210.1" dur="4.67"> Omunye umgadli wachaza ukuthi uma umuntu engalwi nomuntu ngamunye ebambelela ku >
< start="214.77" dur="2.87"> ikhodi iseli lonke lingamshaya lowo muntu. >
< start="217.64" dur="3.33"> Kwesinye isikhathi umuntu wesilisa angashaywa ngenxa yokuphazamiseka okuncane, futhi kwesinye isikhathi kungenzeka kube njalo >
< start="220.97" dur="2"> osolwa ngokuthile angakwenzanga. >
< start="222.97" dur="1.5"> "Ubani ontshontshe ukudla kwami?" >
< start="224.47" dur="3.03"> Akekho ophendulayo, kanti obuthakathaka uthatha ukushaywa. >
< start="227.5" dur="1.849"> Awunamandla, uthatha icala. >
< start="229.349" dur="2.851"> Kwakufanele akwenze, ngoba wayezolahlekelwa ubuso uma engakwenzanga. >
< start="232.2" dur="2.7"> Njengoba wonke umuntu esho lapho, kufanele ulwe nje. >
< start="234.9" dur="4.039"> Banezimiso eziningi ezingabhaliwe abazemukelayo, kanti eyodwa ibizwa nge-GABOS. >
< start="238.939" dur="3.281"> Lokho kusho ukuthi, "Umdlalo awususelwa ku-Sympathy". >
< start="242.22" dur="3.82"> Ngokungafani namanye amajele e-federal, cishe ungathathwa ngaphansi kwephiko lomuntu. >
< start="246.04" dur="4.059"> I-Jail yindlela yokulwa ngokweqile kunejele, yize sizwa kancane ngesihluku >
< start="250.099" dur="1.081"> yezinhlelo zejele. >
< start="251.18" dur="4.01"> Vele ungene ezinhlanganweni lapho iziboshwa zangaphambili zikhuluma khona ngolwazi lwazo ezilungisweni >
< start="255.19" dur="3.53"> uhlelo futhi uzothola abaningi babo bethi ijele lalibi kakhulu. >
< start="258.72" dur="4.55"> Okuhlekisayo wukuthi iningi labantu alikaze litholakale linecala okwamanje futhi bayelashwa >
< start="263.27" dur="2.01"> kubi futhi ubhekane nezinsongo ezengeziwe. >
< start="265.28" dur="4.35"> Isikhathi sokuqala sinokwesaba ngokuphelele futhi ezimweni eziningi kufanele sibe yiso; ngengqondo >
< start="269.63" dur="4.68"> ungathwali umthwalo lapho; ukudla kuyesabeka; amaseli angcolile futhi azosebenzisa iningi >
< start="274.31" dur="1.3"> wesikhathi sabo kuleso seli. >
< start="275.61" dur="3.36"> Uzothola iziboshwa eziningi zithi zizokwenza “inhlamvu” nje ukuphuma lokho >
< start="279.97" dur="1.669"> Inhlamvu kungunyaka ejele. >
< start="281.639" dur="3.121"> Kungani amajele engaba yikhaya lesimo esibi kakhulu, ungahle uzibuze. >
< start="284.76" dur="3.159"> Yebo, azenzelwe ngempela ukugcina umuntu isikhathi eside kakhulu. >
< start="287.919" dur="4.191"> Inkinga iwukuthi, ngisho nesiqu esifushane singadalulwa kanti abanye abantu benza okuningi kakhulu kunokuthi >
< start="292.11" dur="2.149"> ukuhlala isikhashana uma icala labo libambezelekile. >
< start="294.259" dur="2.171"> Ijele kufanele linikeze uhlobo oluthile lwenduduzo… >
< start="296.43" dur="4.72"> Ijele liyisihogo esinezinzuzo, ijele lizwa izinhlungu ezingapheli esihlanzweni nasezingxenyeni ezimbi kakhulu >
< start="303.009" dur="4.111"> Ngenxa yalokhu, iziboshwa zivame ukuba zinokhahlo, futhi zinolaka, futhi zikhungatheke, futhi ngezinye izikhathi zilungile nje >
< start="307.12" dur="3.63"> Uhlanya nje ngemuva kokuphuma crank-athon enezinyanga ezili-18. >
< start="310.75" dur="3.13"> Konke okushiwoyo, cabanga ukuthi kuthunyelwe ebubini kulezi zindawo? >
< start="313.88" dur="4.379"> Ake sibuyele kuwe sithathwa sisiya e-6th floor eMiami. >
< start="318.259" dur="3.861"> Kube lapho esitokisini unogada ehamba, futhi labo nogada bavumile ukuthi abakwazi ukuphendula >
< start="322.12" dur="2.03"> nodlame olushesha ngokwanele ukuluvimba. >
< start="324.15" dur="2.57"> Bayakuvuma ukushiya iziboshwa kumakhodi abo. >
< start="326.72" dur="3.6"> Labo nogada basho obala ukuthi akukho abangakwenza mayelana nokushaywa kanzima, >
< start="330.32" dur="1.37"> ukugwazwa, ukweba. >
< start="331.69" dur="3.34"> Akwanele nje ukuba abe yonke indawo futhi ubone konke. >
< start="335.03" dur="4.17"> Lapho lowo nogada ehamba, ushiywe ukuba ulwe nayo esitezi 5 no-6 sika >
< start="339.2" dur="2.469"> lesi sakhiwo esibi esinsundu. >
< start="341.669" dur="1"> Kodwa kungani? >
< start="342.669" dur="1.361"> Kungani bengahlangani nje? >
< start="344.03" dur="2.729"> Isiboshwa esithile saphendula sathi, "Ikhodi yikhodi." >
< start="346.759" dur="1.19"> Kusho ukuthini lokho? >
< start="347.949" dur="3.981"> Kusho ukuthi uma ubonwa ungamhloniphi umuntu olwa naye, ubopha. >
< start="351.93" dur="4.2"> Awubonisani nomuntu ngoba le akuyona indawo efanelekile yokuqala. >
< start="356.13" dur="4.349"> Abantu abangahlali emigwaqweni, bathi, abaqondi ikhodi yemigwaqo. >
< start="360.479" dur="3.681"> Lolu hlobo lwasendle lasentshonalanga lubyela emuva kulokho ososayensi abaye bakubiza ngokuthi, “isiko >
< start="364.16" dur="1"> wodumo. ” >
< start="365.16" dur="4.09"> Uhlazisa umuntu wesoka, uyalwa, udonsa izinkemba, uthatha izikhundla eziyishumi udubule. >
< start="369.25" dur="4.069"> Emazweni angaphandle sivele saphuma kulokhu iningi, kodwa ngaphakathi ejele >
< start="373.319" dur="3.231"> le khodi, leli siko lokuhlonipha, lisakazekile. >
< start="376.55" dur="4.18"> Phezu kokwebiwa nokulwa ne-Main Jail eMiami kuye kwabizwa ngokuthi okubi kakhulu >
< start="380.73" dur="3.23"> eMelika kwezinye izinhlobo zokuhlukunyezwa kwabesilisa nabesilisa. >
< start="383.96" dur="3.84"> Izinto ezesabekayo zingenzeka lapho onogada kuphela behamba ngaphandle kwamaseli kanye ngehora. >
< start="387.8" dur="3.54"> Iziboshwa ezibuthakathaka zishiywe njengezinyamazane phakathi kwabazingeli be-apex. >
< start="391.34" dur="4.09"> Ngokujabulisayo, ijele lenze intuthuko enkulu kule minyaka embalwa edlule, libe linye kakhulu >
< start="395.43" dur="2.269"> Kufakwe amakhamera. >
< start="397.699" dur="4.44"> Bese kuba nodaba lwalesi sakhiwo sejele abantu abaningi abathatha izidakamizwa zengqondo. >
< start="402.139" dur="4.241"> Ukuxabana kweziboshwa kuvame ukuqubuka lapho umuntu ogula ngengqondo enza ngendlela ezinye iziboshwa >
< start="406.38" dur="1"> angithandi. >
< start="407.38" dur="3.88"> Njengoba iMarshall Project ibike, “uhlelo lwejele laseMiami yisikhungo esikhulu kunazo zonke >
< start="412.96" dur="4.42"> Abantu abagula ngengqondo bavame ukuba inyamazane, bese begcina phansi ngamadoda angama-20 athatha >
< start="417.38" dur="1.39"> iphenduka ukuze ibabhoboze. >
< start="418.77" dur="2.23"> Lokhu ukuhoxa kuphathwa kanjani. >
< start="421" dur="2.58"> Nganoma iluphi usuku amadoda angena futhi aphuma ezigulini. >
< start="423.58" dur="2.25"> Kufana nomnyango ojikajikijiki ogcwele igazi. >
< start="425.83" dur="4.18"> Eqinisweni, kube nodlame olukhulu kangangokuba uMnyango Wezobulungiswa uthe iMiami-Dade >
< start="430.01" dur="5.409"> Uhlelo lwejele lwalungaphandle kokuphathwa futhi iziboshwa kanye nonogada babhekana nezingozi eziningi kakhulu. >
< start="435.419" dur="1.84"> Kukhona obekufanele kwenziwe, kusho umnyango. >
< start="437.259" dur="4.771"> Eminyakeni embalwa emuva kwejele kwabhekana nokuhlolisiswa okuningi ngemuva kokushona kwabantu abangu-8 ezinyangeni ezinhlanu nje. >
< start="442.03" dur="5.1"> AbakwaDoJ bathi ukushona kwabathathu abantu abangenangqondo kuyaphazamisa kakhulu. >
< start="447.13" dur="4.39"> Omunye umfana obezoshayela ngenkathi emisiwe ungene ngomgqibelo kwathi eseshonile ngokulandelayo >
< start="451.52" dur="1"> UMsombuluko. >
< start="452.52" dur="3.869"> Abanye ababili bashonile kungakapheli isonto, ikhomishini ithi uhlelo, "luphuke kakhulu." >
< start="456.389" dur="4.601"> Kwavela ukuthi kulaba abayisishiyagalombili abashonile eyodwa ibigxile ekuyaphunyuleni iziboshwa >
< start="460.99" dur="1.76"> ebelandela emva kwakhe ezomshaya. >
< start="462.75" dur="1.62"> Kwashiwo nemimese. >
< start="464.37" dur="4.04"> Isitezi esibi kakhulu, esake savalwa, kwesinye isikhathi sasibizwa ngokuthi “Isisekelo Esilibalekile.” >
< start="468.41" dur="3.979"> Kwakuyizinga lesishiyagalolunye lapho kwakugcinwa khona iningi labantu abagula ngengqondo. >
< start="472.389" dur="3.861"> Lapha kwakuyilapho iziboshwa zazivame ukushiyelwa khona bese zinganakwa, futhi ezimeni eziningi zazithatha >
< start="476.25" dur="1.55"> izimpilo zakho. >
< start="477.8" dur="3.92"> Emuva kosuku kuleli banga kuleli zinga iziboshwa zazilala phansi ngaphandle kokulala, yize kunjalo >
< start="481.72" dur="2.91"> indawo yokusebenza kwengqondo kwakumele ibe ngumuntu onenhlonipho. >
< start="484.63" dur="3.759"> Ezinye iziboshwa zitholwe ziphuza ezindlini zangasese, kuthi lapho lokhu kufikelwa yindaba kule ndawo >
< start="488.389" dur="1.24"> wabizwa, "owesabekayo". >
< start="489.629" dur="1.401"> Kube khona ukukhala komphakathi. >
< start="491.03" dur="3.65"> Kepha njengoba uzwile, kusenezinkinga lapho umuntu onenkinga yezengqondo evalelwa >
< start="494.68" dur="5.84"> phezulu nama-gladiator asemgwaqweni wanamuhla neziqhwaga ezinekhodi engenazo ngamabomu ngamabomu. >
< start="500.52" dur="4.84"> Akuwona wonke amafulethi amabi njengezindaba esikhulume ngazo, futhi kwezinye izikhathi ikakhulukazi >
< start="505.36" dur="2.81"> abantu abayingozi noma abasengozini bazohlalwa bodwa. >
< start="508.17" dur="4.24"> Noma kunjalo, phelela kwelinye lalawo mafulethi aphakeme ejele elikhulu futhi uzobona >
< start="512.41" dur="4.66"> ukuthi kunjani ukuboshwa kwelinye lamajele aqinile emhlabeni. >
< start="517.07" dur="3.82"> Kunezinye izinkinga futhi, ze-ilk engajwayelekile. >
< start="520.89" dur="5.35"> Ngo-2019, abantu abangu-17 baphuthunyiswa esibhedlela bevela kule ndawo ngenxa yokugula okuthile okungazelelwe. >
< start="526.24" dur="1.76"> Kwehla izisebenzi eziningana nazo. >
< start="528" dur="1"> Kwenzenjani? >
< start="529" dur="1.35"> Akekho owazi ngempela. >
< start="530.35" dur="3.66"> Iqembu lamabhomu labizwa ngisho ngemuva kokuba kutholakale uketshezi olungaziwa, kepha kwaphenduka >
< start="535.1" dur="4.23"> Isizathu okungenzeka ukuthi abantu baqale ukuzikhathaza kwakuwukubhema intuthu evela kunobuthi >
< start="539.33" dur="1"> isidakamizwa. >
< start="540.33" dur="3.75"> Uma umoya wokuhogela intuthu usuka kude ungamhlisela umuntu phansi nausea nausea, >
< start="544.08" dur="2.24"> yini eMhlabeni ababengabhema kuyo lapho? >
< start="546.32" dur="1"> Ngesi? >
< start="547.32" dur="2.36"> Kuyakhombisa nje ukuthi leyondawo ihlanya kanjani. >
< start="549.68" dur="4.37"> Sizokushiya ngesibuyekezo esikuthole ekhasini le-Facebook elizinikezwe kuleli jele: >
< start="554.05" dur="1.12"> "Wamukelekile esihogweni. >
< start="555.17" dur="4.77"> Umuntu angaba ngcono ngokufa kunokukhuthazelela ukuhlukunyezwa nokuhlushwa ukuboshwa >
< start="559.94" dur="3.05"> kulo mshubhu ongcolile nowenyanyekayo. ” >
< start="562.99" dur="4.21"> Awufuni ukuthunyelwa eMiami Jail kodwa ufuna uchofoze kokunye kwalokhu >
< start="567.2" dur="1"> amavidiyo. >
< start="568.2" dur="4.36"> Ngakho-ke hamba ubuke le vidiyo manje ukuthola enye ividiyo enhle evela ku-The Infographics Show noma lena >
< start="572.56" dur="1"> lapha. >
< start="573.56" dur="3.48"> Ungakhetha eyodwa kuphela kepha ukhethe futhi uhambe ubuke enye ividiyo manje! >